China DIN 6923 - 1983 Hexagon Amandongomane Nge Flange abenzi kunye nabathengisi U-Hebei HanWang
I-DIN 6923 - 1983 I-Hexagon Nuts kunye neFlange
Imilinganiselo efanayo: ISO 4161; I-EU 1661;
Amantongomane esisangqa anesiseko esifana ne-washer sokuhambisa uxinzelelo ngaphezulu kwendawo enkulu kunye nokuqinisekisa ukuba i-fastener ihlala iqinile. Zixhaphake ukusetyenziswa kwimigca yokuhlanganisa apho imisebenzi ikhawuleziswa kusetyenziswa isinxibo esinye endaweni yenathi kunye newasher.
Sifumene igama lokuba ngowona uthembekileyo Umthengisi weFlange Nut oHanjisiweyo ye-Industrial Flange Nut kweli candelo. Iiseringi ezikwiMetric Flange Nut zi-angled kangangokuba zigcina i-nut ekujikelezeni kwicala elinokuyikhulula i-nut. Ngenxa yeeseringi, azinakusetyenziswa ngewasha okanye kwiindawo ezingafunekiyo zikrweshwe.
Uyilo lukaHeibei Hanwang lweentlobo ngeentlobo ze-nut zeserange ezikumgangatho we-5, ibanga lesi-8, kunye namantongomane esinyithi nge-A2 kunye ne-A4 esemgangathweni, Sikwanikezela ngowona mgangatho uphezulu Umsebenzi onzima weHex Nuts ehlangabezana nemigangatho yesizwe neyamazwe aphesheya ye-DIN kunye ne-ISO.
Isicelo sokubopha i-Stainless
Isinyithi esingenasici yinto yokuzikhethela kwizicelo zangaphandle kunye neendawo apho ukubola kubangelwa. Ubininzi beIzinto zokubopha zentsimbi ezingenasici u-Hebei Hanwang ziyafumaneka kwinqanaba elisezantsi le-A2 yentsimbi engenasici ukuze ilungele uninzi lweemfuno. Kwizicelo ezikwiindawo zaselwandle apho ukubola kwamanzi etyuwa kuyinkxalabo, uninzi lwezinto zokuvala izinto ezingenasinxibo nazo ziyafumaneka kwi-A2 kunye ne-A4 intsimbi engenasici.
Ukongeza koku, ezinye izinto zokubopha iintsimbi ezingenasici ziyafumaneka kumandla athile aqine kubandakanya i-A2-50, A2-70,, A4-50, A4-70.
ngolwazi oluthe kratya. nceda uqhagamshelane Hebei Hanwang yokuthengisa yokuhlala.
Ulawulo loMgangatho weHeibei Hanwang Fasteners
Izinto zokubopha zeHanwang sebenzisa inkqubo esemgangathweni elawulwa ngokupheleleyo Ukulandeleka kweemveliso ukusuka kumthombo wabo wokuqala wobonelelo, kwisitokhwe, ngokuthe ngqo ukuhambisa kumthengi. Ukulungiselela i-Hebei Hanwang Fasteners iseke ilebhu esebenzayo yolawulo lomgangatho kunye neofisi esebenzayo yolawulo lomgangatho kunye namalungu abasebenzi abanomdla.
UHeibei Hanwang Izixhobo zovavanyo eziqinisa
Ukujonga ukuba iimveliso esizibonelelayo ziyahambelana nemigangatho efanelekileyo kunye neemfuno ezithile zabathengi, Izibophelelo zikaHeibei Hanwang sebenzisa izixhobo zovavanyo lweengcali ezinje:
Tensile Machine ukutsala iintlobo Bolts / neenkozo zepistasi
Ukuqina Machine (ephathekayo nelebhu)
Ukufumanisa i-Spectrum kunye nezixhobo zokufumanisa i-metallography
Ukulungela ukuvavanya umatshini kuvavanyo lwendibano
Zombini ubulukhuni beRockwell kunye noMatshini wokuvavanya uBlinell
I-Thread Gauges yeebholithi kunye neenuts
Nesingxobo Testerness Ukutyeba
Ngeenkcukacha nceda unxibelelane nathi ngakumbi ngeemveliso ezithile.
Imilinganiselo Izigidi (mm)
IBakala 4/6/8 / A2-50 / A2-70 / A4-50 / A4-70
Izinto eziphathekayo Intsimbi yeCarbon / yentsimbi
Gqiba Umnyama / iZinki ngumfanekiswana / Umbala wokuzimela
Ukupakisha iinketho Ingxowa kunye pallet / Boxed kunye pallet
Egqithileyo Inzima yehex nut
Okulandelayo: I-GB / T 10433 - 2002 Iitshizi zeNtloko zeStudi zeArc Stud Welding
I-Metric DIN 933 I-Hexagon yeNtloko yeCape Screw / Bolts ...
I-GB / T 10433 - 2002 Iitshizi zeNtloko zeTshizi ze ...
Inzima yehex nut
I-Metric DIN 934 Hexagon Nuts